परिवार नियोजन सेवाको बुझाई अझै पनि साँघुरो छ – कविता अर्याल – Khabar Samachar
परिवार नियोजन सेवाको बुझाई अझै पनि साँघुरो छ – कविता अर्याल
– परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत हाल के के कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्?
– यो अन्तर्गत सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुलाई कोरोना महामारी र लकडाउनले कस्तो खालको असर गर्‍यो?
– कोभिड नियन्त्रणसँगै यी सेवाहरु पनि त सरकारले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर पनि कसरी सेवाहरु प्रभावित भए?
– परिवार नियोजन सेवालाई जनसंख्या नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यो सेवा कत्तिको महत्वपूर्ण छ र यसको प्रयोगदरको अवस्था कस्तो छ?
– कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर बढ्यो। सबैभन्दा बढी प्रभावित उनीहरु भए। यस किसिमको महामारीसँग जुध्न हामी तयारी अवस्था थिएनौँ?
– कतिपय विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। नेपालमा पनि तेस्रो लहर आए परिवार नियोजन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन कस्तो खालको तयारी गरेका छौँ या गर्नुपर्नेछ ?
– महामारीको समयमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय राम्रो भएन। त्यसैले महामारी नियन्त्रण गर्न तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भयो भन्ने धेरै गुनासो आए। त्यो समन्वयको अभाव तपाईले कत्तिको महसुस गर्नुभयो ?
– प्रजनन् र परिवार नियोजन सेवाको महत्व स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझेका छन् ? यसलाई कतिको प्राथमिकता राखेको पाउनु भएको छ ?